Nzira yekuwanazve sei chivimbo chekati? | Noti Katsi
Hukama hunowanikwa nekatsi nemunhu hunenge hwakafanana nehwahwo neimwe nhengo yerudzi rwayo. Izvi zvinorevei? Iyo feline inozvibata nenzira iyo yainoona yakakodzera zvichienderana nemabatirwo ainowana. Kusiyana nembwa, kana paine chimwe chinhu chakaitwa kwaari icho chisingamufadzi zvakanyanya, isu tichafanirwa kuedza - zvakanyanya kana zvishoma, izvo zvakare zvinoenderana nehuswa iye - kuti awanezve chivimbo chake.
Neichi chikonzero, zuva nezuva, tichiverenga kubva pakutanga, isu tinofanirwa kuita zvese zvinogoneka kuti agare achifara nesu. Mushure mezvose, ndisu takasarudza kugara naye. Zvakadaro, matambudziko anogona kugara achimuka, saka kana iwe uchida kuziva kuti ungaitazve sei chivimbo chekati, usamire kuverenga.
1 Nei tichigona kurasikirwa nekutendwa nekati?
2 Nzira yekuwanazve sei chivimbo chekati?
2.1 Katsi yako inofara here kana kwete?
2.2 Ipa nzvimbo
2.3 Iva munyoro
2.4 Tamba naye
2.5 Maitiro iwayo haasi kushayikwa
2.6 Nguva yekudya kwemasikati
Nei tichigona kurasikirwa nekutendwa nekati?
Chekutanga pane zvese, zvakakosha kuti tizive kuti nei kuvimba ikoko kwakarasika, nekuti zvikasadaro zvichave zvakatiomera kuti tizive zvekuita kuti tiwanezve. Zvikonzero zvakajairika ndizvo zvinotevera:
Mboro yanzwa kunge isina hanya: mamiriro akajairika ndeyekuti katsi inopedza zuva rese iri yoga kumba, uye kana mhuri yake yevanhu ichidzoka havatombomuteerera kunyangwe achimuda zvakanyanya.
Akabatwa zvisina kunaka: kushungurudzwa hakusi kwepanyama chete, zvakare kutaura. Ichokwadi kuti kati hainzwisise zvinorehwa nemazwi edu, asi inoziva zvakawanda nezve toni uye nezwi vhoriyamu. Kana vanhu vako vakapopota uye / kana kukurova, kana vachiridza mimhanzi ine ruzha, kana vachikushungurudza,… mhuka ichagara mukutya uye, chokwadika, ichadzidza kusavimba nevanhu.
Uye, pakupedzisira, kana isu tikaita chero chinhu chingamutsamwisa sekumumanikidza kuti ave munzvimbo uko zviri pachena kuti haazvifarire, semuenzaniso, kana kana tikasaratidza rudo kana kutamba naye.
Kutanga, tinofanirwa kuziva kuti katsi chinhu chipenyu chinoda kuchengetwa muhupenyu hwayo hwese. Ne "hanya" Handisi kungoreva mvura uye chikafu, asi zvakare nzvimbo yakachengeteka uye yakanaka kwaunogona kugara. Uye zvakare, isu tinofanirwa kumuratidza, zuva nezuva, kuti tine hanya zvakadii nemitambo, caress, uye zvakare neapo neapo nekwanisi (chikafu chinonyorova) chekati nguva nenguva.
Kana isu takagamuchira katsi yakamboshungurudzwa, kana kana nekuda kwechikonzero chero nguva pfupi yadarika tisina kuibhadhara, tinofanirwa kuva nemoyo murefu naye y tarisa muviri wako kuti unzwisise zvairi kuedza kutiudza. Iwe unofanirwa kuenda zvishoma. Hatifanire kumanikidza mamiriro acho.
Patinoenda kunomubata, tinomurega achinhuwidza ruoko rwedu uyezve, kana asina kufemereka kana kutya, tinobata zvinyoronyoro uye zvishoma nezvishoma musana wake. Uye kana iwe uchiri kusada kugashira kufefetera, hapana chinoitika, ichave nenguva yacho. Tichakukoka kuti utambe mazuva ese uye zvishoma nezvishoma iwe unzwisise kuti isu hatizokukuvadze.
Katsi yako inofara here kana kwete?
Izvo zvakakosha kuti kunyangwe isu takupa iwe mamwe mazano pamusoro, iwe unoziva maitiro ekuziva kana katsi yako ichifara newe kana kwete. Kana paanokuona iwe, vadzidzi vake vakawedzeredzwa, nzeve dzake dzakapfava, uye muviri wake wakakombama, saka anogona kunge asiri kugadzikana. nehuvepo hwako uye uchada kutiza.
Kana achitya, achahwanda mukona yeimba. Kana usati wakambozviita, imhaka yekuti chimwe chinhu chaitika chakakonzera kutya uye iwe unotya… zvinokwanisika kuti warasa chivimbo chako.
Izvo zvakakosha kuti iwe uzive izvo zvisina katsi yako uye kuti iwe unodzora zvausingade. Kunyangwe kana iwe usina chokwadi chii chingaitika kwaari, saka unogona kutevedzera anotevera matipi kuyedza kuwana chivimbo chake zvakare.
Ipa kati yako nzvimbo kuti unzwe wakachengeteka uye kukurudzirwa kuti unzwe kuda kwako uye rudo zvakare. Feline yako ichauya kwauri kana achinzwa akagadzirira, asi haufanire kumumanikidza kuti adaro kana achiri kufungidzira. Remekedza iyo nguva painogona kunge yakagadzirira. Unofanira kuva nemoyo murefu pazviri.
Usambofa wakamutora mumaoko ako kana iwe ukaona kuti haadi, nekuti iwe unogona kutora kurohwa kwakanaka. Kana ukamubata oshinyira, rega aende uye ngazviende zvoga. Icho chiratidzo chekuti unoda nzvimbo yako wega.
Kana iye asingade kuti umubate, saka rega akuudze iwe kana iwe uchida kubhinywa uye uzviite nerudo rwako rwese kana achinge akurega uchizviita.
Paanokutendera kuti umubate, ndiyo imwe nzira yekukuudza kuti anokuvimba zvakare, kunyangwe akasakutendera kuti umutore. Kuzvitevedza kukutevera kana kukwiza pamakumbo ako zvakare chiratidzo chakanaka.
Unogona kuedza kumupuruzira paanenge akarara pamusoro wake kana pakati penzeve dzake uye kunyangwe chirebvu chake kuti uone kuti anozvigamuchira here. Asi kana katsi yako isingade, nzvenga. Iwe unogona zvakare kuyedza kukwesha neunyoro uye unononoka mafambiro. Izvi zvinomuita kuti anzwe kunakirwa paunenge uri.
Paunoona kuti inotanga kusvika kwauri, chichava zano rakanaka kutanga kuedza tamba naye. Iwe unogona kuita izvi kuti uvakezve kuvimba uye kuita kuti feline yako inzwe kuti iwe unonyatsomuda., unomuremekedza uye kuti unofarira kupedza nguva naye.
Unogona kushandisa katoyi kiyi kana chimwe chinhu chaanofarira kutamba nacho setambo kana rwakapetwa makadhibhokisi ... chero chinhu chekuti afarire newe chinogamuchirwa. Rangarira kuti inguva yekutamba uye kuti iwe unofanirwa kumupa kutarisisa kwako kuzere kuti anzwe zvechokwadi kudiwa.
Maitiro iwayo haasi kushayikwa
Maitiro akakosha kuvanhu, asiwo nekitsi. Vanoda kuziva zvichaitika zvinotevera. Naizvozvo, tsvaga maitiro munzvimbo dzakasiyana dzeimba yako kuti uzvipfuure padivi pako.
Unogona kusanganisa kutamba uye kuzorora. Iwo maratidziro ane katsi yako akakosha saka chengeta icho mundangariro muzuva rako zuva nezuva.
Nguva yekudya kwemasikati
Kupa katsi yako inobata nguva nenguva uye (inobata-kati-inobata) zvakare izano rakanaka rekuchengetedza kuvimba kwake mauri. Unogona kupa mubairo maitiro avo akanaka.
Zvakare, zvipe chikafu iwe pachako uye nenzira iyi unozosimbisa hukama hwepedyo nekatsi yako, nekuti vanogara vachisarudza avo vanhu vane hanya nechikafu chavo. Mupe mibairo muruoko rwako kuti azive kuti iwe ndiwe unomuda.
Kudyidzana kunofanirwa kugara kuri kwakanaka nekuti kana katsi yako ikatanga kutya zvakare nekuda kwekutsiurwa, kuvimba kunogona kupunzika zvakare uye kuti kudzoreredza chisungo kuchazonyanya kuoma.
Kana asingade kana kuvanda, usamudzingirira kana kumumanikidza kuti adye kubva paruoko rwako. Iva nemoyo murefu uye mutendere kuti azviite kana achinzwa kugadzirira.
Kana, kunyangwe tichiedza, mwedzi inopfuura uye isu tisingavandudzike, zvinokurudzirwa kwazvo kubvunza kune ethologist kana feline Therapist.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Nzira yekuwanazve sei chivimbo chekati?